Uru nke mma roba sports flooring-News-Topflor China ejedebeghị
Echiche:25 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-04-13 Mmalite: Saịtị
Mgbe ị na-ahọrọ ala, ọ dị mkpa ịkọwapụta ebumnuche bụ isi ma jiri ọnọdụ nke ala, ọkachasị nhọrọ nke ala roba egwuregwu. Njirimara anụ ahụ na kemịkal nke ngwaahịa a, ndụ ọrụ ya na ọdịdị ngwaahịa a, yana ihe ndị ọzọ achọrọ na ọrụ ga-edo anya.
Egwuregwu roba floor: a n'ala mere nke sịntetik roba ahụ na ya polima ihe. A na-ejikarị ya eme ihe: ụzọ ndị dị n'èzí, okporo ụzọ na-apụ apụ, ime ụlọ egwuregwu ime ụlọ, ebe a na-emega ahụ na ebe ndị ọzọ nwere okporo ụzọ dị elu, yana ụlọ akwụkwọ ọta akara, ụlọ akwụkwọ, ama egwuregwu na ebe egwuregwu ndị ọzọ.
Egwuregwu egwuregwu roba na-arụ ọrụ nke nsị absorption, enweghị mmịfe, na mkpuchi mkpuchi. O nwekwara ọrụ nke ire ọkụ, iyi nkwụsi ike, antistatic, nguzogide corrosion, na nhicha dị mfe.
Tụnyere nke roba sports flooring na ndị ọzọ na flooring
A. Tụnyere osisi: ujo absorption, oku retardant, waterproof, antistatic, na corrosion eguzogide ọgwụ;
B. E jiri ya tụnyere nkume: enweghị mmịfe, nsị ujo, mkpuchi mkpuchi, ezigbo mgbanwe, mgbochi mgbochi, dịtụ mfe ma dịkwa mma iwu;
C. Tụnyere ịkwanyere: ujo absorption, na-eyi ndị na-eguzogide, na-abụghị ileghara.
N'etiti ha, a na-ejikarị ụlọ roba na-eme egwuregwu na PVC ụlọ a na-eme egwuregwu. Mgbe ị na-ahọrọ n'etiti ha abụọ, attentionaa ntị na esemokwu ndị a
1. Ihe mejupụtara na imepụta ihe dị iche: a na-ekewa ala egwuregwu roba n'ime homogeneous na heterogeneous. Homogeneous roba n'ala na-ezo aka a n'ala ka nke vulcanized otu-oyi akwa ma ọ bụ multi-oyi akwa Ọdịdị na otu agba na mejupụtara dabere na eke roba ma ọ bụ sịntetik roba; na-abụghị homogeneous roba n'ala na-ezo aka a n'ala dabeere eke roba ma ọ bụ sịntetik roba.
2. Dị iche iche na agba: O siri ike na-agba roba egwuregwu flooring, n'ihi na roba nwere ike agba absorption, otú ọtụtụ roba flooring nwere otu agba; na PVC ala nwere ọtụtụ agba, enwere ike jikọta ya na uche ya, nke nwere ike inye ndị na-emepụta ihe Ọtụtụ nhọrọ.
3. E nwere ọdịiche dị na nrụnye nhịahụ: PVC flooring bụ Mkpa ọkụ na udidi na adaba na ngwa ngwa iji wụnye; roba flooring dị arọ na nwụnye bụ ihe na-agwụ ike. Ọzọkwa, usoro ntinye nke ala rọba siri ike karị. Ọ bụrụ na usoro ahụ ezighi ezi, afụ ga-apụta, ihe achọrọ maka ntọala nke onwe ya zuru oke, ma ọ bụghị na a ga-ekwubi okwu ntụpọ nke isi ntọala ahụ.
4. E nwere ọdịiche dị iche iche na ahịa na nchekwa nchekwa: a na-eji ụlọ egwuregwu roba eme ihe naanị na ụfọdụ ebe njedebe dị elu n'ihi ọnụ ahịa ya dị elu, na oke ya dị obere; mgbe ịkwanyere flooring ọtụtụ-eji ruru ya super elu na-eri arụmọrụ na nwere nnukwu ahịa a nwere. Agbanyeghị, ala roba nwere nguzogide abrasion siri ike ma bụrụkwa ihe pụrụ iche na ịmị amị na nchekwa nchekwa. A na-eji ya n'okporo ụzọ ndị dị n'èzí, windo na-apụ apụ, mgbatị, ebe a na-ahụ maka ahụ ike na ebe ndị ọzọ nwere nnukwu okporo ụzọ, yana ụlọ akwụkwọ ọta akara, ụlọ akwụkwọ, ama egwuregwu, ụzọ ụgbọ oloko, ihe eji arụ ọrụ, Ogwe ụgbọ mmiri ahụ enweghị ntụpọ.